I-Sandy Dunes Retreat e-Grand Beach - I-Airbnb
I-Sandy Dunes Retreat e-Grand Beach
Grand Marais, Manitoba, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Del And Donna
Indlwana entsha enhle etholakala e-Grand Beach Regional Park. Uhambo lwemizuzu engu-9 nje oluya e-Grand Beach edumile emhlabeni, elinye lamabhishi aseNyakatho Melika anesihlabathi esimhlophe phakathi kwezinyawo zakho ehlobo nokudoba eqhweni ebusika.
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe inazo zonke izinto eziwusizo zesimanje kuwe.
Jabulela ikhofi lakho lasekuseni emphemeni ongemuva, faka inqola bese uya osukwini ebhishi noma uhambe ngezinyawo uya e-Rock Trail imizuzu nje engu- ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe. Ilungele uhambo lwakho lwemvelo!
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe inamakamelo angu-3 anemibhede ethokomele, isiqhingi esikhulu ekhishini, i-BBQ, i-TV, i-Wifi, umshini wokuwasha nokomisa, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, ifriji elikhulu, ubhavu ogcwele oneshawa egumbini lokugezela, umshini wekhofi we-Keurig, amalineni ombhede, amathawula okugeza kanye nokupaka okutholakala ngaphambili kwendlu eyakhiwe ngamapulangwe. Ikhishi linezitsha zokupheka eziyisisekelo, izitsha nezinto zokupheka ezifana nekhofi, itiye nezinongo. Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe ilungele izilwane ezifuywayo. Indlwana iyinkathi yonyaka engu-4 futhi ilungele izivakashi ebusika.
Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe isendaweni yase-Grand Beach Regional park futhi idinga izimoto ezingena epaki ukuze zibonise imvume yepaki evumelekile engathengwa e-Manitobaelicensing.ca.
Ibungazwe ngu-Del And Donna
Lapho ukubhukha sekuphelile, sizotholakala ngocingo nange-imeyili.